အဆိုပါ 11 သငျသညျလုံးဝလာမည့်နှစ်တွင်လက်လွတ်မနိုင် PlayStation ဂိမ်း - သတင်း Rule
အဆိုပါ 11 သငျသညျလုံးဝလာမည့်နှစ်တွင်လက်လွတ်မနိုင် PlayStation ဂိမ်း
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ 11 သငျသညျလုံးဝလာမည့်နှစ်တွင်လက်လွတ်မနိုင် PlayStation ဂိမ်း” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, အင်္ဂါနေ့ 16 ဇွန်လအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2015 12.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Sony ကအသစ်ဂိမ်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းကိုချွတ်ပြသ, အချို့သောကြီးမားတဲ့ဂိမ်းအတွက်သီးသန့်ဒြပ်စင်အသစ်အသေးစိတျကိုပေးတော်မူ၏, နှင့်၎င်း၏စီမံကိန်း Morpheus virtual reality နားကြပ်လာမည့်နှစ်တွင်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့သည်.
အ Final Fantasy VII ဇာတ်ကားထက် ကျော်လွန်., နှင့် Shenmue III ကို Kickstarter ကကင်ပိန်း, ဒီမှာရှိပါတယ် 12 လာမည့်နှစ်တွင်ဘို့သင့်ကို So​​ny ရဲ့ PlayStation lineup အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သောအရာတို့ကို.
Project မှ Morpheus
Sony ရဲ့ Project မှ Morpheus VR နားကြပ်လာမည့်နှစ်တွင်၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်တွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်. ဓါတ်ပုံ: jae က C. ဟောင်ကောင် / AP
Sony က E3 မှာ၎င်း၏ virtual reality နားကြပ်နှင့် Oculus ပြိုင်ဘက်စီမံကိန်းကို Morpheus အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့ bits သည်ထင်ရှား. ဒါဟာလာမည့်နှစ်တွင်၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်တွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်, "တရာအများအပြားဒေါ်လာ" ကုန်ကျခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ရှိလိမ့်မည် 30 ဂိမ်းများ, ပဟေဠိများနှင့်အပန်းဖြေဂိမ်းမှပြောက်ကျား Studios ကနေပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး Multi-player ကိုသေနတ်သမားအထိ.
Sony ကပြန်လည်ကြေညာခဲ့သည်နောက်ဆုံးဂါးဒီးယန်း, Colossus ၏ကောင်းချီးစွန့်စားမှုဂိမ်း Ico နှင့်အရိပ်၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှအလွန်အမင်းမျှော်လင့်တတိယဂိမ်း, သောဧရာမငှက် / ခွေးအရာ၏အကူအညီနှင့်အတူပျက်စီးခြင်းရှာဖွေစူးစမ်းလူငယ်တစ်ဦးယောက်ျားလေးများ၏ထိန်းချုပ်မှု၌သငျလိုကျတယျ.
လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်က Sony က PS3 အတွက် E3 မှာဂိမ်းထုတ်ဖော်ပြသ, ယခုအခါကုမ္ပဏီကနောက်ဆုံးက PS4 မှာလာမည့်နှစ်တွင်ကစားရန်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကတိပေး.
စီးရီး၏ဒါရိုက်တာ, Fumito Ueda, ဆဲမရှိတော့ Sony ကအလုပ်လုပ်နေသော်လည်းဂိမ်းဖွင့်ခေါင်းလိမ့်မည်.
အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာကာသတူးဖော်ရေးဂိမ်းအကြားအတိုင်မှအဆုံးမဲ့ကမ္ဘာကတိပေးထား, အသက်တာသစ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယတက်မှုတ်. ဓါတ်ပုံ: အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky
ဗြိတိန်နိုင်ငံက developer များမင်္ဂလာပါဂိမ်းများမှ Epic အာကာသတူးဖော်ရေးဂိမ်းအဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ချွတ်ပြခဲ့, တိုက်ပွဲများအပါအဝင်, ဂြိုလ်သားမျိုးစိတ်အချို့ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖျက်ဆီး၏ကောင်းတစ်ဦး bit နဲ့ - သင်အဘယ်သူမျှမတော်ရှေ့မှာခဲ့သည့်နေရာတွင်ရဲရငျ့စှာသှားဖို့တစ် Star Trek-တူသောအတွေ့အကြုံကနေလိုခငျြင့်အရာအားလုံးကို.
ဂိမ်းရဲ့အဓိက selling point ကိုသက်သက်စကေးဖြစ်ပါသည်: ကစားသမားများအကြားအတိုင်နှင့်ရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းအဆုံးမဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ generated ကြယ်ပွင့်စနစ်များ, Guildford အခြေစိုက် 10-လူတစ်ဦး Indie developer များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအားလုံး.
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း: သုည Dawn
Horizo​​n သုည Dawn အတွက်စက်ရုပ်ဒိုင်နိုဆောထွက်သည်စိတ်ထဲ.
ကျွတ်ထွက်သည်4PS4 ဂိမ်းကစားဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသည့်တစ်ခုတည်းသော Post-Apocalyptic ကမ္ဘာမက. Killzone developer များပြောက်ကျားအားကစားပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဦးကတတိယပုဂ္ဂိုလ် roleplaying ဂိမ်း, မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း: သုည Dawn တစ်ကမ်ဘာ​​စက်တွေအစားအစာကွင်းဆက်၏ထိပ်ဆုံးမှာထိုင်ရတဲ့ဖျက်ဆီးခံရဟောင်းတဦး၏ထွက်ကြီးထွားလာတင်ဆက်. ဒီဂိမ်းဟာအမြိုးသမီးဇာတ်ကောင် features, အိမ်မှာလုပ်လက်နက်များနှင့်ကြီးမားသောစက်ရုပ်ဒိုင်နိုဆော၏အမဲလိုက်, လာမည့်နှစ်တွင်ထွက်မှုကြောင့်.
Uncharted 4: တစ်ဦးကသူခိုးရဲ့အဆုံး
နာသန် Drake ရဲ့နေလည်းနောက်ဆုံးစွန့်စားမှု. ဓါတ်ပုံ: Sony က
Sony ရဲ့မြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်စွန့်စားမှုဂိမ်းစီးရီးယခုနှစ်၎င်း၏စတုတ္ထနှင့်နေလည်းနောက်ဆုံး outing ရှိသည်လိမ့်မယ်. Uncharted 4: တစ်ဦးကသူခိုးရဲ့အဆုံးဆူပူသောင်းကျန်းခြင်းနှင့်အတူပရိသတ်တွေအတူတူပိုကျွေးမွေးမည်, သေနတ်ပစ်, မြို့လမ်းမတို့၌အားဖြင့်တောင်တက်နှင့်ပြိုင်ကား. အခြားမည်သည့်နာမဖြင့်အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်.
Little က Big Planet ကို-ဖန်တီးသူမီဒီယာမော်လီကျူးကနေနောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းအခြားကြီးကျယ်သော build-သင့်ရဲ့-ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဤအချိန်ကအိပ်မက်ကဲ့သို့လောကရှိအမှုအရာဖန်တီးခြင်းအကြောင်းသေးသေးထည်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုလျော့နည်းပြီးပိုင်.
တော်တော်လေးတာဘာမှအနုပညာအပါအဝင်ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းကဖန်တီးနိုင်ပါသည်, ဂိမ်းများ, ရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတ, ဟန်.
အရာသစ်တောထဲမှာလိုက်တယ်ရ. ဓါတ်ပုံ: Firewatch
သငျသညျစခန်းချတူလုပ်ပါ? တစ်ဦးကလိုက်တယ်ပုံပြင်လိုင်း? ထိုအခါ Campos စန်တိုရဲ့ Firewatch သင်တို့အဘို့အဖြစ်နိုင်. သငျသညျသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝအကျအဆုံးများပြီးတစ်သစ်တောမြျှောအဖြစ်အလုပ်ကြာသူတစ်ဦးသည်လူ play, ထူးဆန်းတဲ့အမှုအရာကိုတော၌ဖြစ်ပျက် Start လာသောအခါမိမိအသာရေဒီယိုအပျေါမှာအမြိုးသမီး Co-အလုပ်သမားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်အတူ.
ပိုများသောပုံပြင်, လာမည့် Destiny တိုးချဲ့ရေးအတွက်ပိုပြီးသပိတ်နှင့်အနည်းငယ် Play Station ကသီးသန့်.
မူရင်းဂိမ်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, စက်တင်ဘာလအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ် Destiny ချဲ့ထွင် Sony ရဲ့ consoles စဖို့သီးသန့်အနည်းငယ်အမှုအရာရှိသည်လိမ့်မယ်. PS3 နဲ့က PS4 ဂိမ်းကစားနှောင့်ရှက်တိုက်ပွဲကို: Echo အခန်းထဲကလို့ခေါ်တဲ့အပိုသပိတ်ကစားရဦးမည်, ထိုကျောက်စိမ်းယုန်လို့ခေါ်တဲ့လက်ဖြောင့်ကဲ့သို့အတိုင်းအတာနှင့်အတူအချို့သောသီးသန့်လက်နက်အသစ်တစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားကင်းထောက်ရိုင်ဖယ်.
တာဝန်ရဲ့တောင်းဆိုမှု: Black က Ops III ကို
Duty ပိုခေါ်ရန်, Sony ရဲ့ console ကိုတခုတခုအပေါ်မှာသီးသန့် beta ကိုအတူဤအချိန်. ဓါတ်ပုံ: ခရစ်ယာန် Petersen / Getty Images
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသေနတ်သမား၏ကို Activision ရဲ့ယန္တရား, Duty Black က Ops III ၏ခေါ်ဆိုမှု, အ Play Station ကမှသီးသန့်အသစ်မြေပုံမြင်ရကြလိမ့်မည် 4, ဂိမ်းရဲ့အွန်လိုင်း beta ကိုစမ်းသပ်ခြင်းလည်း Sony ရဲ့ console ကိုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်နေစဉ်.
လုပ်ကြံခံရစောင့်ဆိုင်းတစ်ကမ်ဘာ. ဓါတ်ပုံ: မိုက်ကယ်နယ်လ်ဆင် / EPA
အဆိုပါပြောင်ခေါင်းနှစ်လုံးလုပ်ကြံအေးဂျင့် 47 နောက်တဖန် ပြန်. ဖြစ်ပါသည်, နှင့်က Black Ops III ကိုဆင်တူ, နောက်ဆုံးပေါ် Hitman သီးသန့်ရှေ့ဆက်ပစ်လွှတ်၏ PS4 မှာဂိမ်းတစ်ခု beta ကိုစမ်းသပ်မှတဆင့် run ပါလိမ့်မယ်. ပိုပြီးအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လက်စားချေကိုမျှော်လင့်.
Final Fantasy ၏ကမ္ဘာ့ဖလား
တစ်ဦးက Final Fantasy VII ဇာတ်ကားစီးရီးထဲကနေမှသာသတင်းမဟုတ်ခဲ့. PS4 နှင့် PS Vita အတွက်ဂိမ်း Final Fantasy ကမ္ဘာ့လည်းအဘို့ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ခဲ့ဟုခေါ်တွင် 2016, ဂန္ Final Fantasy ဇာတ်ကောင် cutesy ဗားရှင်း၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု featuring. အဘယျသို့သူတို့လုပ်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်ထင်ရှားမဟုတ်ခဲ့.
• E3 2015: Ubisoft ရည်မှန်းချက်ကြီးလူမှုရေး virtual reality အတွေ့အကြုံတွေကိုစီစဉ်
• E3 2015: တစ္ဆေ Recon Wildlands Ubisoft ရဲ့အကြီးဆုံးအစဉ်အဆက်ပွင့်လင်းကမ္ဘာဂိမ်းဖြစ်လိမ့်မည်
• E3 2015: Lara Croft နှင့်အတူ, Xbox စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, Halo5နှင့် holographic Minecraft
26337	0 အပိုဒ်, တာဝန်ရဲ့တောင်းဆိုမှု, ယဉ်ကျေးမှုကို, E3, E3 2015, အားကစားပြိုင်ပွဲ, သတင်း, Play Station က, က Playstation 4, ရှမွေလသည် Gibbs, Sony က, နည်းပညာ, virtual reality, virtual ကမ္ဘာ
← ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အလားအလာပထမဦးဆုံးလူ့ဦးခေါင်းအစားထိုးအမေရိကန်ဆရာဝန်များမှအစေးကို ရ Nokia ကြီး 3210 အားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးဖုန်း? →